Shaqsi Xildhibaan hore ahaa oo lagu dilay Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shaqsi Xildhibaan hore ahaa oo lagu dilay Muqdisho
Shaqsi Xildhibaan hore ahaa oo lagu dilay Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Hawlwadaag ee gobolka Banaadir, rag hubeysan ayaa halkaasi waxa ay ku dileen nin la sheegay inuu ka mid ahaa Baarlamaankii 9-aad ee dalka soo maray.
Ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Cabdi Bajamaal, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen raggii dilka geystay inay ka baxsadeen goobta, kahor inta aysan halkaasi soo gaarin ciidanka ammaanka.
Wararka kale ee aan caawa ka heleyno Waaxda Shooriyada degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dhaawacay nin 60 sano jir ahaa, kaasi oo ay dhaawaceen rag hubeysan, warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka mid yahay ergada xildhibaanada ku soo dooratay magaalada Baydhabo.
Magaalada Muqdisho maanta oo keliya waxaa lagu dilay dad tiro ahaan gaaraya 6 qof, dhammaan ragga dilalka geystay ma jiro cid gacanta lagu soo dhigay, marka laga reebo in ciidanka ammaanka ay qabteen askari gabar ku dilay Ex-control Afgoor.
Waxaa muuqata inay kordheen dilalka ay geysanayaan kooxaha ku hubeysan Bastoolaha, Hay’daha ammaanka ayaanan weli qaadin talabooyin ay kaga jawaabayaan dhacdooyinkan.